Oromo News 05.15.21 | KWIT
Bakkeen daldalaa dhuunfa seera ufii kan addaa qabaachu danda’u kanaafu seera isaani hordafuun umattasan akka kabajan akka ta’uu qaban himan. Ammati Jiraattoni Woodburry County keessa parantii 33% ta’an talaali corona virus muluu isaa fudhatani jiru. Odeefannoon talaali corona virus fudhachuuf beellama qabachuu yoo kan feetani Siouxland District Health Department 279-6119 yookin www.siouxlanddistricthealth.org deemun argachuu ni dandeetu.
Lallabdooni amatiin magaala sanabata kana fi gidirsanbata kan kadhannaa godhan seera amma sababa dhukuba jiru kana hordofuudhan akka gochuu qaban dura buutoni himani jiran. Seerri sunniinis haguugi fuula godhachuu fi addaan fageenya ufii eegachuu akka tae himan. Seerri jalqabaa kunis guyyaa sanbataa March dhuma irrati kan seera irra ooludha. Ogeessi Bishop R.Walker Nickless akka jedheti, seerri Covid-19, fi biiron amantoota seera haaraawa CDC kan amma bahee akka kaluuti fudhachuu dandau himan.
Oromo News 05.14.21
By Fatiya Adam • May 14, 2021
Bakkeen dhukkuba itttisanii fi hordafan har’a akka jedhanitti nama talaali hunda fudhateef haguugi fuula fudhatani deeman yookin fayyadaman hundattu haguugi fuula akka dhiisu danda’an himan.
Seerri haaroyni ammas bakka namni walitti qabamuu bus, plane, hospital, mana hidha, fi warra ala galuu keessati haguugi fuula akka godhatan kan godhamaniidha, garuu bakka dalagaafi maneen barumsa irra deebiani seera banuu akka dan’an himan.